Madagasikara 1947 2911412575 9782911412578 - Madagascar Library
Photographer: Charles Ravoajanahary.
ISBN-10: 2-911412-57-5 (2911412575)
ISBN-13: 978-2-911412-57-8 (9782911412578)
Item Identification Code (UID#): 1619
Tsipika (2008). (First Published 2007)
Lavitra loatra ilay nosy. Lavitra loatrailay taona : 1947. Ny nosy mena, ny tany mena... Dia ho lazaina fa tantara marina sy nitranga avokoa ny aroso aminareo eto, ny lefona nisidina sy ny basy nipoaka, ny faty nianjera sy nandrakotra ny tany. Hehy ihany no atsipy, hamafa sy hanarona ny ratra nankarary. Nahoana no voatery handahatra sy hiaro-tena aho raha hilaza ny tantarako sy ny lovan-tsofiko ? Andakira ity nosiko. Lavitra loatra ity taona : 1947. [...] Mitaky fanazav�na amin�ny � Reny Malala � aho.
Fa inona marina moa ity koranantsika ity ? 47, volana martsa 1947 sy ny vokany rehetra. Ireo ady tamin�ny fanjanahantany, ny vono-olona nandritry ny roa taona. Nataoko hoe hazava ny resaka : tsy alahelo sy fahoriana ve no tsapa sy re raha miloaka ny vava izany 47 izany ? Ny fahaverezana sy ny faharesena, fahanginana tsy hay lanjaina nefa toa mbola mivesatra ao an-tsaina ihany, manaloka hatrizao, mihoma-miadana ao an-kibo ao.
Boky nilaina nosoratana ! Soratra vavolombelona maneho ny hevitry ny mpanoratra iray tsy misalasala my miapanga ny tsy rariny, mametra-panontaniana mikasika ny fanjanahantany, ny fifandraisan�ny fanjakana taloha sy ny ankehitriny, ny fanoratan�ny tany mandroso ny tantara ary ny tokony iheveran�ny tany an-dalam-pandrosoana an�izany toe-javatra izany...
Teraka tao Antananarivo tamin�ny 1967 Raharimanana. Mpanoratra gazety (RFI) sy mpampianatra izy taloha. Mpanoratra ny asany ankehitriny. Manodidina ny tantara, tsiaro, fiainana sy kolotsaina malagasy ny asa-sorany rehetra. Maro ny boky efa navoakany. Anisan�izany Nour, 1947 (Le Serpent � plumes, 2001), L�arbre anthropophage (�ditions Jo�lle Losfeld, 2004), Za (�ditions Philippe Rey, 2008), Tsiaron�ny nofo (tononkalo, �ditions K�A, 2008).
History > Madagascar > Rebellion 1947